ဒီတစ်ပတ် “ရင်ဖွင့် နားစွင့် ပန်းတိုင်ဆီရွက်လွှင့်” အစီအစဉ်မှာတော့ ဒေါင်းက လူငယ်တ… – PVTV Myanmar
ဒီတစ်ပတ် “ရင်ဖွင့် နားစွင့် ပန်းတိုင်ဆီရွက်လွှင့်” အစီအစဉ်မှာတော့ ဒေါင်းက လူငယ်တ…
Open your Heart, Listen and Let's go to Goal
ဒီတစ်ပတ် “ရင်ဖွင့် နားစွင့် ပန်းတိုင်ဆီရွက်လွှင့်” အစီအစဉ်မှာတော့ ဒေါင်းက လူငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ ရင်ဖွင့်သံကို ခံစားဖတ်ရှုပြထားပြီး CDM ကိစ္စ၊ COVID 19 ကိစ္စနဲ့ Online က စာသင်ကြားနေမှုကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးနဲ့ ဆွေးနွေးမေးမြန်းထားပါတယ်။
နွေဦးတော်လှန်ရေးကာလ ပြည်သူလူထုရဲ့ နာကျင်ခံစားရသမျှတွေကို ရင်ဖွင့်နိုင်သလို ဝေဝေဝါးဝါးဖြစ်နေတဲ့ ဒွိဟစိတ်တွေကို တတ်နိုင်သမျှမေးမြန်းရှင်းပြပေးမှာကြောင့် နားစွင့်ထားကြသင့်ပြီး အားလုံးအတူတကွ တူညီသော ပန်းတိုင်တစ်ခုဆီ ရွက်လွှက်ကြဖို့ ရည်ရွယ်တဲ့ “ရင်ဖွင့် နားစွင့် ပန်းတိုင်ဆီရွက်လွှင့်” ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်ကို ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ဒေါင်းက စီစဉ်တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ ယခုအစီအစဉ်ကို PVTV က အပတ်စဉ် စနေနေညတိုင်း တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
PVTV လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာ https://facebook.com/pvtvmyanmar ရဲ့ Message Box မှာ ရင်ဖွင့်နိုင်သလို သိရှိလိုသည်များကိုလည်း မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ ပြည်သူလူထုရဲ့ ခံစားမှုစာလွှာတွေထဲက အချို့ကို ဒေါင်းက ခံစားဖတ်ရှုပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး မေးခွန်းတွေကိုလဲ သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီး တတ်နိုင်သမျှ ရှင်းလင်းဖြေကြားပေးသွားမှာဖြစ်လို့ မပြတ်နားစွင့်ထားကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
ရင်ဖွင့် … နားစွင့်ရင်း ပန်းတိုင်ဆီ အတူတူ ရွက်လွှင့်ကြပါစို့။
PVTV ၏ Youtube Channel ဖြစ်သော www.youtube.com/c/pvtvmyanmar ကိုလဲ Subscribe လုပ်ထားကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
Like – 43K Share – 8315
Yee Wai says:
2021-06-05 at 9:25 PM
မဂ်လာပါရှင့် ဒေါင်းနဲ့ လေးစားရပါသော ဒေါက်တာ ဇော်ဝေစိုး။
Thin Yanent says:
2021-06-05 at 9:30 PM
ေဒါင္းေရာ ဆရာႀကီးေရာ က်န္းမာ ခ်မ္းသာၾကပါေစ
Thaung Kyi says:
2021-06-05 at 9:38 PM
လျပည့္ ဝန္း says:
2021-06-05 at 9:46 PM
မှန်လိုက်တာဆရာရယ် ကျွန်မ တို့
Aunty Ohn says:
2021-06-05 at 9:47 PM
ခွေးဝဲစား တစ်ကောင် မတန်တရာ ဦးဏှောက်မရှိ အာဏာရူးလိုက်တာ တို့ပြည်သူတွေ အရာရာ အောက်တန်း နောက်တန်း ကျနေရပြီ၊ကလေးတွေရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေမဲ့နေရတယ်၊အမြန်သာ အသေစိုးနဲ့ သေပါတော့ အာဏာရူး ချီးဦးဏှောက်ရယ်
Orchid Phyu says:
2021-06-05 at 9:52 PM
Tĥăñț Žïń Hêïñ says:
2021-06-05 at 9:58 PM
U Minn Ko Aung says:
2021-06-05 at 10:00 PM
ဆရာ ကျန်းမာပါစေ ဘေးကင်းလုံခြုံပါစေ ။ ဆရာ ပြောသလိုဘဲ လူ သား ဆန် သူတို့ရဲ့ လူသားတော်လှန်ရေး မှာ လူမဆန် တဲ့ သူများ အမြန်ကျဆုံးပါစေ ဗျာ ။ အရေးတော်ပုံ အောင်ရမည် ✊
Than Than Htay says:
2021-06-05 at 10:05 PM
လူသားဆန် တဲ့အတွက် လူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဆရာနဲ့ ဒေါင်းကိုကျေးဇူးတင်တယ်။
SN NY says:
2021-06-05 at 10:14 PM
လေးစားပါတယ် ဆရာဒေါက်တာ ဇော်ဝေစိုး နဲ့ ❤️ဒေါင်း …. ဆရာတို့ပြောတဲ့ စကားအခွန်းတိုင်းမှာ လေးနက်မှု စေတနာ မှန်ကန်တဲ့ ဦးတည်ချက်တွေနဲ့ မို့ ဂုဏ်ယူပါတယ် .. ဟိုစကစ က အာဏာရူးတို့များ ပြောလိုက်တဲ့ စကားတိုင်းက အလိမ်အညာ ယုတ်မာအောက်တန်းကျလွန်းတယ် .. အမြဲနားထောင်နေပါ့မယ် အရေးတော်ပုံ အောင်ရမည် 👍👍👍👍
May Thwin says:
2021-06-05 at 10:16 PM
ဆရာတို့ စကားတွေ နားထောင်ရတာ အားတက်ရပါတယ် ကျန်းမာ ပါစေရှင့်
2021-06-05 at 10:36 PM
တကယ့်ကို တလုံးချင်းနဲ့ထိထိမိမိပြောတတ်၊ပြောလေ့ရှိတဲ့ လူနှစ်ယောက် ရင်ဖွင့်ပေးတော့ နားစွင့်ရသူတွေ အားတက်ရပါတယ်။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။
Myo Win Tun says:
2021-06-05 at 10:57 PM
ကြားရတာ နားဝမှာချို သလိုပါပဲ အရေးတော်ပုံ အောင်ကိုအောင်ရမည်။ 💪💪💪
Ko Gyi Soe says:
2021-06-05 at 11:07 PM
အကိုခင်ဗျာကျနောကတော့ဧရာဝတီတိုင်းကပါ ကျနောညီက ကျောင်းဆရာပါ CDM လုပ်ချင်ပါတယ် CDM လုပ်ရင်ဖန်းတယ် ေနာက်ပြီးဖန်းမရအိမ်က မိသားစု ကိုပါဖန်းတယ် သူကတောကျေနောကိုမေးတယ် ညီလေးတိုပြည်တွေနိင်ရင်တော့လုပ်ခွင်ရှိရင် ဆက်လုပ်မယ် ခုကလဲ အလုပ်ထွက်ရင်လဲမရ ပြည်သူတွေ ခုလိုဝန်းထမ်းလေးတွေဘာလုပ်သင့်တယ်ဆိုတာကို အကြံပေးစေချင်ပါတယ်
Mar Mar Cho says:
2021-06-05 at 11:21 PM
Sian Nem says:
2021-06-05 at 11:30 PM
Na mel hoih hiauhou lei ta ei U Daung
Daw Green Lay says:
2021-06-05 at 11:46 PM
ကိုယ်ကCDMပါဌာနကNon CDMလုပ်ပြီလုပ်သက်ခွင့်လုပ်ထား2/21လမှယနေ့ထိရုံးမတက်ပါCDMလာNon CDMရှင့်
Toe Oung says:
2021-06-06 at 12:29 AM
Congratulations!!! All those working for the people of #Myanmar: professionals, artists, activists, laymen, et all.
Ni Lar Myint says:
2021-06-06 at 7:17 AM
ဆရာ Dr ဇော်ဝေစိုး နှင့် ကိုဒေါင်း ကျန်းမာပါစေ ဘေးအန္တရာယ်ကနေကင်းလွတ်ပါစေ ။
Gayathri Khaing Hnin Shwe says:
2021-06-06 at 7:48 AM
ဆရာကြီးရဲ့ ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ ပြောဆိုမှုတွေက တကယ်ကိုအားရစေပါတယ်။ အရေးတော်ပုံအောင်ကိုးအောင်ရမည်💪💪💪
Nway Oo Yay says:
2021-06-06 at 8:16 AM
နဝတအချိန်ကာလကတည်းက အလုပ်ကိုနှုတ်ထွက်စာတင်ပြီးရပ်ဆိုင်းခဲ့လို့ အမိတက္ကသိုလ်ကြီးရဲ့CDMဆရာမ မဖြစ်​ပေမယ့် ပြည်သူတစ်​ယောက်ရဲ့CDM ကိုမီတာခမ​ဆောင်၊စည်ပင်ခွန်မ​ပေးအပါအဝင် စွမ်းနိုင်သမျှ အကုန်လုပ်တယ်။
2021-06-06 at 10:38 AM
ဆရာ ကျန်းမာပါစေ ဂုဏ်ယူလေးစားပါတယ်။ ဆရာရဲ့ စီမံမှူ၊ဦးဆောင်ပေးမှူတွေဟာ ပြည်သူတွေအတွက်တန်ဖိုးအရမ်းရှိပါတယ်။ ဒေါင်းကိုလည်းကျေးဇူးပါ
Htarsu Myat says:
2021-06-06 at 10:51 AM
ဒေါင်းလို Public Figure တစ်ယောက်က ဒီအစီစဉ်ကို သေချာတာဝန်ယူပေးပြီး ပြည်သူလူထုသိအောင် လုပ်ဆောင်ပေးနေတာ ❤️❤️❤️အရမ်းကောင်းပါတယ်
ဆရာကြီး ကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကျန်းမာ ဘေးကင်းပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ် 🙏🙏🙏
ပညာရေး ကို အကြွင်းမဲ့ယုံကြည်ပါတယ် ပညာတတ်တဲ့လူတွေကပဲ ပညာရေးကို တန်ဖိုးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်
ပညာတတ်တဲ့လူတွေဦးဆောင်တဲ့ NUG ကိုပဲ ယုံကြည်စွာနဲ့ နောက်ကလိုက်ပါမယ်
2021-06-06 at 10:58 AM
အခုစစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာ CDM လုပ်တဲ့သူတွေအပေါ် ပြတ်သားသလို ပြည်သူ့အစိုးရပေါ်တဲ့အခါ non cdm တွေ အပေါ် ပြတ်သားပေးပါ ဆရာကြီးရှင့်
Ma Aye Lay says:
2021-06-06 at 12:07 PM
​ကျေနပ်မိပါတယ် ဆရာကြီး ကို​ဒေါင်းနဲ့ အဖွဲ့သားအားလုံးပြည်သူနဲ့အတူကျမ်းမာစွာဖြင့်အမြန်ဆုံး​အောင်မြင်ကြပါ​စေ။
Thantzin Kyi Phyu says:
2021-06-06 at 3:24 PM
ကြည့်ရင်းကြည့်ရင်းနဲ့ ဆရာကြီးဦးဇော်ဝေစိုးကို မတရားချစ်ခင်လေးစားလိုက်တာ ❤️❤️❤️❤️❤️နဂိုကတည်းကတော့ ကြည်ညိုပြီးသားပါ အခုကတော့အတိုင်းထက်အလွန်ပဲ
တွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဆရာကြီးတို့လိုခေါင်းဆောင်တွေရလိုက်တာ အနာဂါတ်တိုင်းပြည်အတွက် တစ်ကယ်ကို ခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်
ပြည်သူ့အသည်းစွဲဒေါင်း လေးလည်း ရောက်တဲ့အရပ်မှာ အစစအရာရာအဆင်ပြေစွာနဲ့ ဘေးအန္တာရယ်ကင်းကင်းရှိပါစေ🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
Aye Aye Aung says:
2021-06-06 at 4:16 PM
ဆရာရဲ့စကားသံကြားရပြီး အရမ်းအားတက်မိတယ် . လေးစားပါတယ် ဆရာ . ဆရာတို့အားလုံး ဘေးကင်းကြပါစေ 🙏အရေးတော်ပုံ မုချအောင်ရမည်။
Khin Su says:
2021-06-06 at 4:26 PM
Cmt ရေးချင်တာကတော့ အားလုံးအဆုံးထိနားထောင်စေချင်တာပါပဲ
ဝေခွဲမရတာတွေ မသိသေးတာတွေ ရှင်းလင်းပြီး မျှော်လင့်ချက် ပိုရှိလာပါတယ် ဆရာကြီး နဲ့ ဒေါင်းရေ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အဆက်မပြတ်နားဆင်ပါမယ်ရှင့်
Nwai Thu says:
2021-06-07 at 9:11 PM
ဆရာကြီးရှင့် ကျွန်မ ကနယ်ကနေ မန္တလေးမှာတာဝန်ကျလို့ နေစရာမရှိလို့ ကျောင်းထဲနေပါတယ် CDM လုပ်တဲ့ ၂လပိုင်းကစလုပ်ပြီး ၂လပိုင်းကုန်ကတည်းကကျောင်းထဲမနေပဲ ရွာပြန်သွားတာ ၅လပိုင်း ထဲထုတ်ပယ်စာလည်းကျရော ကျောင်းထဲက ကျွန်မအိမ်ကို သူခိုးဝင်ခိုးလို့ အိမ်ထဲက စားအိုးစားခွက် ပန်ကာ တီဗွီအောက်စက် အတွင်းထဲအဝတ်အစားကလွှဲပြီး လုံခြုံနေတဲ့ကျောင်းဝင်းထဲ ကျွန်မအိမ်လေးတစ်အိမ်ထဲ သူခိုးဝင်ခိုးသွားတယ်တဲ့လေ ကျောင်းအုပ်က သူ့နဲ့မဆိုင်သလို ဘာတွေခိုးသွားလဲတောင်မအေးဘူး ကျွန်မကထုတ်ပယ်ခံထားရပြီးပြီဆိုတော့ ကျောင်းနဲ့မသက်ဆိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောနဲ့လေ ကျွန်မ CDM လုက်တာ ဘယ်တော့မှ နောင်တမရဘူး ထုတ်ပယ်ခံရတော့လည်းဝမ်းတောင်သာနေသေးတယ် စစ်ကျွန်ပညာရေးကနေ လွတ်လွတ်ကင်းကင်းဖြစ်သွားလို့ ကျွန်မတို့ NUG အစိုးရ ပြန်ရခဲ့ရင် အဲဒီကျောင်းအုပ်ကို ဖြုတ်ပေးစေချင်ပါတယ် ကျွန်မတို့ကို အထင်သေးအမြင်သေးလုပ်ခဲ့တဲ့ အဲဒီကျောင်းအုပ် တစ်သက်မမေ့ဘူး
-အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရက ဝန်ကြီးဌာန ၃ ခုအတွက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ၃ ဦး ထပ်တိုးခ…